အလယ်အဖွင့်နီးပါးသရ - ဝီကီပီးဒီးယား
(Near-open central vowel မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အလယ်အဖွင့်နီးပါးသရ (အင်္ဂလိပ်: near-open central vowel) သည် အပြောဘာသာစကားအချို့တို့တွင် အသုံးပြုသည့် သရသံအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာသဒ္ဒဗေဒအက္ခရာတွင် ဤသရသံကို အက္ခရာအသေး အေ (a) အား အထက်အောက်လှန်ထားသည့်ပုံစံ ⟨ɐ⟩ ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်စကား၌ ဤသရကို ⟨ʌ⟩ အဖြစ် အက္ခရာဖလှယ်မှု အများဆုံးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤသရသည် အနောက်တစ်ဝက်ဖွင့်သရ အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အလား (မှတ်ယူ)ဖလှယ်ကြသည်။ အချို့ဒေသယိစကားများတွင် ဤ ⟨ʌ⟩ အသံထွက်ကို တွေ့ရှိရသော်လည်း ပြောဆိုသူအများစုသည် အလယ်သရပုံစံ [ɐ] (သို့) အလယ်တစ်ဝက်ဖွင့်အပြန့်သရ [ɜ] ကို သုံးစွဲလေ့ရှိကြသည်။
မတြာဝက်သရ (schwa-ရွှား) ⟨ə⟩ ကဲ့သို့ ⟨ɐ⟩ သည် သရဝိုင်းခြင်းဖြစ် မဖြစ် အတွက် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသော စွယ်စုံသုံးသရ အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသရကို အလယ်အဖွင့်နီးပါးသရ၊ အရှေ့နီးပါးအဖွင့်နီးပါး၊ အနောက်နီးပါးအဖွင့်နီးပါးသရ၊ အလယ်တစ်ဝက်ဖွင့်သရ၊ အလယ်အဖွင့်သရ၊ စသည်တို့အတွက် သုံးစွဲနိုင်သည့်အပြင် ယေဘုယျသဘော ထိုနေရာတစ်ဝိုက်တွင် ထုတ်လုပ်/ဖြစ်ပေါ်သော သရသံပုံစံတို့အတွက်လည်း သုံးစွဲနိုင်ပေသည်။
သရဝိုင်းခြင်းအတွက် သီးသတ်သတ်မှတ်မထားသောကြောင့် နှုတ်ခမ်းကိုဝိုင်း၍ (သို့) ဖြန့်၍ ထွက်ဆိုနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ လက်တွေ့အားဖြင့်မူ အပြန့်(နှုတ်ခမ်းဖြန့်)သဘောမှာ ပို၍အဖြစ်များသည်။
↑ International Phonetic Association (1999), p. 166.
↑ Anonby (2011), p. 378.
↑ Gilles & Trouvain (2013), pp. 68, 70.
↑ Ternes & Vladimirova-Buhtz (1999), p. 56.
↑ Cox & Fletcher (2017), pp. 64–65.
↑ Krech et al. (2009), p. 86.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အလယ်အဖွင့်နီးပါးသရ&oldid=668182" မှ ရယူရန်
၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၅:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၅:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။